Manchester City Oo 1-0 Ku Garaacday Tottenham Hotspur Kuna Guuleysatay Koobka League Cup
HomeHoryaalada KaleManchester City oo 1-0 ku garaacday Tottenham Hotspur kuna guuleysatay koobka League Cup
April 26, 2021 Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester City ayaa ku garaacday kooxda Tottenham Hotspur gool iyo eber kulan ka dhacay Wembley Stadium oo ay ku hanteen koobkoodii afaraad oo isku xiga ee League Cup-ka .
Wiilasha Pep Guardiola ayaa si buuxda u maamulay ciyaarta, laakiin waxay ku qaadatay inay sugaan ilaa daqiiqadii 82aad si ay hogaanka u qabtaan.
City ayaa jahwareer ku reebtay daafaca adag ee kooxda Spurs ilaa Aymeric Laporte uu madax ugu dhaliyay goolka guusha sideed daqiiqo ka hor waqtiga dhamaadka.
Ugaarsiga kooxda Tottenham Hotspur ee ku aadan koob weyn ayaa wali socda, laakiin hada waxaa la joogaa waqtigii diirada la saari lahaa Premier League-ga Maadaama booska Yurub uu yahay mid aan la xaqiijin.
Manchester City, ayaa dhankeeda, waxay diiradeeda u weecin doontaa ciyaarta Semi-finalka Champions League ee la yeelan doonta Paris St. Germain.